Ziyini izivunguvungu namafomu ombani futhi anjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela wake wabona ukuduma kwezulu nombani futhi ungomunye wezinhlobo ezimbili zabantu ababhekene nalezi zimo zezulu: ungazizonda noma uyazithanda. Ukuduma kwezulu nemibani Imvamisa kuyizinto ezimangazayo ezifanele ukuthwetshulwa ngamakhamera ethu namavidiyo wekhamera. Uma zenzeka ebusuku, zimangalisa ngokwedlulele futhi zihle ngendlela emangalisayo.
Kodwa-ke, uyazi ukuthi kungani zenzeka nokuthi iyiphi indlela engcono yokuzivikela kukho? Uma ufuna ukufunda kabanzi ngeziphepho nombani, lokhu okuthunyelwe kwakho 🙂
1 Incazelo yesiphepho
2 Usidala kanjani isiphepho?
2.1 Isigaba sokuqala
2.2 Isigaba sesibili
2.3 Isigaba sesithathu
3 Iziphepho nombani
4 Wenziwa kanjani umbani
Isiphepho asilutho ngaphandle kokuphazamiseka okunodlame ungqimba lomkhathi olubonakala ngokuba nakho imvula enamandla, ukuvunguza komoya, umbani nokuduma kwezulu ngisho nesichotho kwesinye isikhathi. Ngokuvamile, ziyizenzakalo zesimo sezulu ezihlala isikhathi esifushane (cishe imizuzu engama-20 noma ihora eli-1 kakhulu) futhi zithinta indawo ethile kuphela.
Lezi ziphepho zenzeka kaningi ezindaweni lapho amazinga okushisa ephansi noma epholile. Irekhodi lomhlaba lendawo enezivunguvungu eziningi ngonyaka lithathwa yisiqhingi saseJava, esinezinsuku ezingaphezu kwezingu-225 zeziphepho nombani ngonyaka.
Usidala kanjani isiphepho?
Kuyathakazelisa ukubona isiphepho sombani noma, kunalokho, into eyingozi kakhulu uma usezindaweni ezingezinhle ngokwengeziwe. Iziphepho zenzeka lapho umkhathi wenzeka umsinga womoya onamandla obheke phezulu.
Njengoba umoya oshisayo ongaphezulu ukhuphuka, ungena ezingxenyeni zomoya opholile phezulu bese ujika ungene emafwini asathuthuka. Lawa mafu aqala njengo i-cumulus humilis futhi bajika kulokho kubukeka kukakotini obushubile. Njengoba lokhu kungazinzi komkhathi okubangelwa umoya wamanje oya phezulu kukhula, amafu akhula ngokuma mpo aguqukela ekubeni i-cumulus congestus.
Lapho ifu liba likhulu kakhulu, liyabizwa i-cumulonimbus bese ukhipha wonke amanzi agciniwe.
Ukwakhiwa kwesiphepho kuhlukaniswe izigaba ezintathu:
Ukukhuphuka kwemisinga yomoya kubangela ukuba kwakheke ifu lamafu. kuze kufike kumamitha ayi-7.500 XNUMX wokuphakama. Ifu liqoqa amathonsi amanzi bese liba nesimo.
Lapho ifu likhula nangaphezulu, lifinyelela ezindaweni eziphakeme ezingafika kumamitha ayi-12.000, lihlala cishe sonke isifunda se-troposphere. Ngenxa yokungafani kwamazinga okushisa okwenzeka phakathi kongqimba olungezansi lomoya okhuphukayo kanye nongqimba endaweni ephakeme lapho ifu lakha khona, ngaphakathi kungarekhodwa kuze kufike emazingeni okushisa angama -40 no -50 degrees.
Ukuvuselelwa kungafinyelela isivinini esifinyelela kumakhilomitha ayi-100 ngehora. Lapho zingqubuzana nefu, amaconsi omoya angaphakathi kwawo ayajiya futhi agcinwe kumaconsi amanzi aneqhwa, amakristalu eqhwa ngisho namakhekheba eqhwa, kuya ngamazinga okushisa asendaweni.
Lapho bewela ngaphansi kwesisindo sabo, bapholisa umoya oshisayo ezingqimbeni ezingezansi, ngakho-ke, bawenze usinde. Kungaleso sikhathi lapho umoya ophansi owakheka ngejubane elingamakhilomitha angama-50 ngehora elithwala yonke imvula kanye / noma iqhwa libheke ebusweni bomhlaba. Lesi yisizathu esenza ukuthi iningi lamaconsi emvula elenzeka esiphepho likhulu.
Lapho ifu ligcwele ngokuphelele amaconsi amanzi futhi kukhona umoya womoya obheke phansi, okulandwayo ngokugcwele ngemizuzu.
Njengoba ifu lilahlekelwa amanzi nomthamo, umoya waphansi uyeka futhi ifu, endaweni yalo ephakeme, lisakazwa umoya. Lesi yisizathu esenza ukuthi izivunguvungu zivame ukuhlala isikhathi esifushane kodwa zibe namandla kakhulu.
Esinye sezimo esenzeka ngesikhathi seziphepho umbani. Imisebe ayilutho ngaphandle ukushaqeka okufishane kukagesi okwenzeka ngaphakathi kwefu, phakathi kwefu nefu noma kusuka efwini kuya endaweni ethile emhlabathini. Ukuze ugongolo lushaye phansi, kufanele luphakanyiswe futhi kube khona into evelele kokunye.
Amandla wombani aphakame ngokuphindwe kayinkulungwane kunamanje esinawo ekhaya. Uma sikwazi ukubanjwa ugesi ngokukhishwa kwepulaki, cabanga ukuthi umbani ungenzani. Kodwa-ke, kunamacala amaningi lapho abantu abashaywe umbani, basindile. Lokhu kungenxa yokuthi ubude besigxobo bufushane kakhulu, ngakho-ke umfutho waso awubulali.
Imisebe iyakwazi ukusabalalisa cishe kumakhilomitha ayi-15.000 ngehora futhi ulinganise ubude cishe ngekhilomitha elilodwa. Kufike emabhawulweni ombani abude obungamakhilomitha amahlanu kubhalwe izivunguvungu ezinkulu kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, siyaduma. Ukuduma ngukuqhuma okubangela ukuphuma kukagesi okwaziyo ukuduma isikhathi eside ngenxa yemisindo eyakheka phakathi kwamafu, umhlabathi nezintaba. Uma amafu emakhulu futhi eminyene, kuba mkhulu ukwenanela okwenzeka phakathi kwawo.
Ngoba umbani uhamba ngokushesha ngenxa yejubane lokukhanya, sibona umbani ngaphambi kokuba sizwe ukuduma. Noma kunjalo, lokhu kwenzeka ngasikhathi sinye.
Wenziwa kanjani umbani
Umbani ungamelwa ngokuphelele yisimo esenzeka ekhaya lethu lapho sixhuma ngephutha izigxobo ezinhle zikagesi. Lapho senza lokhu, sakha isifunda esifushane esishaya imikhondo.
Leyo nhlansi emfushane esiyibonayo lapho kubangela isifunda esifushane cishe umbani kodwa ngesilinganiso esincane. Le nto yenzeka phakathi kwamafu anokushaja okuphambene nogesi. Ngaphakathi kwefu kunezinti ezibhekene emaphethelweni ezigxilwe kumashaji amahle futhi amabi naphakathi kwamafu nomhlabathi.
Uma lokhu kwenzeka, umbani uvela ngaphakathi kwefu, phakathi kwefu nefu naphakathi kwefu nomhlaba. Ukukhishwa ngakunye kuthatha isigamu somzuzwana futhi, yize kunikeza umbono wokuthi kungumbani kuphela, kukhona izinkulungwane zokulanda.
Ngalolu lwazi uzokwazi ukwazi okuthile ngokuningiliziwe ngokwakhiwa kweziphepho nesizathu sazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ziyini futhi zakhiwa kanjani izivunguvungu nombani?